အိန္ဒြာ: 12/1/08 - 1/1/09
အိန္ဒြာ ( ၁၉၇၃- ...... )
လုဒ်ဝစ်ဗန်ဘီသိုဗင်က သူ့ဆင်ဖိုနီကို ဆွဲဖြဲပစ်ရဲပြီ
ချေဂွေဗားရားက သူ့ယုံကြည်ချက်ကို သွေးနဲ့စက်လိုက်ပြီ၊
ဗင်းဆင့်ဗန်ဂိုးက အာလူးစားနေတဲ့လက်တွေကို ဆေးသားရင့်ရင့်ချယ်ပြပြီ
မောင်ချောနွယ်က သူပိုင် ရတနာကျွန်းမှာ မင်းမူပြီ
အယ်ဒီဆင်က အသံတွေကို သေတ္တာထဲထည့်သိမ်းထားနိုင်ပြီ
ရှယ်လီဆို လှေလေးတစ်စင်းနဲ့ ခရီးဆန့်သွားပြီ
ထူးအိမ်သင်က ညနေကြယ်တစ်ပွင့်နဲ့ ခရီးသစ်ထွင်ပြီ
မာတင်လူသာက ဘာသာရေး ကန့်ကွက်ချက်တွေ ရေးပြရဲနေပြီ
နေးလ်အမ်စထရောင်းက လမျက်နှာပြင်မှာ သူ့ခြေရာတင်ဖို့ အကြီးအကျယ်အိမ်မက်မက်နေပြီ
ဂျာနယ်ကျော်မမလေးရဲ့ သူလိုလူကို အထပ်ထပ်အရောင်တင်နေကြပြီ
ဆစ်ဗီယာပသာ့သ်က ဓါတ်ငွေ့မှိုင်းရှုပြီး အနိုင်ပိုင်းသွားပြီ
မာရီအင်တွိုင်းနက်က နန်းစည်းစိမ်နဲ့ ပေါင်မုန့်ကို လဲပေးလိုက်ရပြီ
မအိက တောင်ပေါ်မှာ ပလိုင်းထမ်းနေပြီ၊
မေမေ့ခမျာတော့ လောကဓံ အသစ်စက်စက်နဲ့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ရပြီ...
အခွင့်အလမ်း၊ ဇွဲ၊ သတ္တိ နဲ့ သိက္ခာ။
ကိုယ့်ဒိုင်ယာရီကိုယ် လိပ်ပြာသန့်သန့် ချန်ရစ်ဖို့
ကိုယ့်ရာဇ၀င်ကိုယ် တင့်တောင်းတင့်တယ် ပြန်ခင်းဖို့
အမှန်တကယ် လုံ လောက် တယ် တဲ့ လား-
စိမ့်အိုင်လာမယ့် သူ့အနာဂါတ်တွေကို ခပ်သောက်ဖို့
သူ့မျှော်လင့်ချက်ကို သူ လက်ယက်တွင်းတူးပြီးစောင့်နေပြီ။ ။
မွေးနေ့ဆိုတာကို ရောက်လာခဲ့ပါပြီ..။ လမ်းခုလတ်၃၅ ဆိုတဲ့ အက်ဆေးလေးကို အကောင်းဆုံးရေးမယ်လို့.. ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်.. ခုထိလက်စမသတ်နိုင်အောင် စိတ်တိုင်းမကျအောင် ဖြစ်နေခဲ့ပေမယ့်.. မွေးနေ့ကတော့ ရောက်လာခဲ့ပါပြီ..။ နောက်ဆုံးတော့...အရင်မွေးနေ့တစ်ခုက ရေးဖြစ်ခဲ့တာကိုပဲ တင်တော့မယ်လို့.. စိတ်ကိုဒုံးဒုံး ချပြီး တင်လိုက်ရတာပါ.... အမြဲတမ်း ကိုယ့်ကိုကိုယ်.. ခံစားနေရတဲ့.. စိတ်တစ်ခုကို ချရေးဖြစ်ထားတဲ့ ကဗျာ တစ်ပုဒ်မို့.... ခပ်ကြမ်းကြမ်းဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်..။ ဘာပဲ..ဖြစ်ဖြစ် အမှတ်တရအနေနဲ့..မို့..။
at 6:38 AM 17 comments:
ဘယ်ခေတ်မှာ..မှ ပွဲမ၀င်တော့ဘူး ။
ကိုယ့်လူက ဘယ်အရောင်ကို ကဲလိုက်ချင်သလဲ
ကိုယ်ကတော့ တိမ်တွေကို နည်း.နည်း..လျှော့ပစ်မယ် ။
သမိုင်းဆိုတာ တစ်နေ့ တခြားထူထဲလာတဲ့ စာအုပ်စင်
ရာဇ၀င်ဆိုတာ နှောင်းလူတွေ အသက်ပြန်သွင်းဦးမယ့် စိတ်ဝိဉာဉ်
ကိုယ့်လူက ... ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ် ဖဲဆင်ရိုက်ဦး..မ လို့ ၊
ကိုယ်ကတော့.....ကိုယ့်ရာဇ၀င်ကို အပွန်းပဲ့ မခံနိုင်သလို
နှောင်းလူတွေ ငြင်းဆိုနေမှာကိုလည်း ..
ရှက် တတ် တယ် ။
လက်ခုပ်တဖျောင်းဖျောင်း တီး ပြီး ဂုဏ်ဖေါ်ဖို့ကလည်း
ဘ၀က ခပ်ညံ့ညံ့ မျက်လှည့်ဝိုင်း မဟုတ် ဘာမဟုတ်
ဒီခေတ်မှာ သိပ် ရိုး တာ သွားပြီ ။
တောင်ရှည်ပုဆိုး .. ဗန်ကောက်လုံချည် .. ဂျင်းဘောင်းဘီ
ပေါ့ပေါ့လွင်လွင် ၊ ကိုယ့်လူ ပြောနိုင်ရင်..
အတ္တ ၊ လှည့်ကွက်
လိမ်ဆင်နဲ့ လိင်စိတ် တွေကို ဘုံထုတ်ထားချင်တယ်..။
"သစ်တစ်ပင်ကောင်း ငှက်တစ်သောင်းနား” ဆိုတာလည်း
ကိုယ့်လူ့  ငှက်တွေချည်းပဲ မဟုတ်လား...။
အခု ကဗျာရေးနေသလောက် ပေါ့ပါးချမ်းသာ မနေတော့-
မွေးနေ့ ဆိုတာ သေနေ့ ရဲ့ နိဒါန်းစာမျက်နှာ
ဒါ့ထက်ပိုပြီး...ရင် ခုန် ကြည် မွေ့ စ ရာ-
မ ရှိ ။ ။
(၂၀၀၆ခုနှစ်၊ဧပြီလထုတ် ပိတောက်ပွင့်သစ်မဂ္ဂဇင်းမှာပုံနှိပ်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်..။ )
(၃၀.၁၂.၂၀၀၈)နေ့ မွေးနေ့ အတွက်အကြိုတင်လိုက်တာပါ..။ လာဦးမယ်ဆိုတဲ့..သဘောပေါ့..။)
at 5:50 AM 13 comments:
စိတ်ကိုမြနေအောင် ချွန်သ ထားလိုက်ပြီ ။
မျက်ရည်ပူတွေ ပါ သွား စမ်း ပ စေ..။
ဘယ်တော့မှ မ ငို တော့ ဘူး..
ညာလက်နဲ့ သမီးကြီးကို စာပြပေးနေရင်း
ကြက်သားအုပ်မကြီးလို ဘယ် သိန်း စွန် ငှက် ကိုမဆို
ရင်ဆိုင်ဖို့ ရဲရင့်နေခဲ့တယ် ။
မစောလွန်းဘူးလား ဘုရားသခင်ရယ် ။
မင်းတို့ ဖေဖေအတွက်ပေါ့ ကလေးတို့.......
မနက်ဖန် ဖေဖေ့ကို ဦးသွားညွှတ်ကြရင်
မင်းတို့လေးတွေမှာ ဘယ်လို အနာတရ....မှ
ရှိမနေကြဘူး ဆို တာ ......
တစ်ခုတည်း ကျန်တော့တဲ့ သက်သေပါ ။
အိမ်ခေါင်မှာ မိုးတွေယိုတာက အစ
မီးဖိုထဲ ထင်းမရှိတော့တာ အဆုံး
ကျွန်မ.... ရုန်းနေရပြီ အကိုကြီးရေ... ။ ။
(ကလျာမဂ္ဂဇင်းမှာ ပါခဲ့ပါတယ် ။ လတွေ၊နှစ်တွေက.နာဂစ်နောက်ပါသွားလို့သေချာမမှတ်မိတော့လို့ပါ.။ )
" သေချာတာပေါ့မေမေရယ် မေမေခံစားခဲ့ရတဲ့ ဒုက္ခသောကတွေနဲ့ မေတ္တာတရားကို သမီးဘယ်လိုမှမှီအောင်
ဒါပေမယ့်သမီးမွေးနေ့ နီးလာတော့ မေမေ့ကျေးဇူးတရားတွေ မေတ္တာတွေကိုပိုပြီးတမ်းတလွမ်းဆွတ်နေမိလို့
သမီးရဲ့ blog လေးမှာတင်လိုက်တာပါ..မေမေ..။ "
at 7:27 AM 14 comments:
ခြေ လက် ခန္ဓာ ၊
အသက် အရွယ် ရာသီ ရေခံ မြေခံမှာ
အမေ့သမီးက ဒီရေ ဒီလှိုင်း ခပ်ကြီးကြီးမှာမှ
အခု ဆဌမအာရုံမှာ လာလာညိနေတဲ့
အရေး အကြောင်း ကြုံလာတိုင်း
အခု စိတ်နဲ့သီချလိုက်တဲ့ လွမ်းသူ့ကဗျာဟာ
၀င်သက် ထွက်သက် ကို ခပ်ပြင်းပြင်းရှူရှိုက်လိုက်
ဖြစ် ပျက်ဆိုတာ စကြ၀ဠာအမှန်တရားလို့
အပိုဝန်တွေဟာ ခရီးဖင့်စေတယ်လေ…။ ။
ခုတော့..ကိုယ်...ဒီကို ထွက်လာမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ ရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့.ကဗျာလေးကိုပဲတင်လိုက်ပါတယ်..
ကဗျာလေး...နဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားတွေပြန်တင်းရတာပေါ့...။
at 6:28 AM 13 comments:
အကြိုက်ဆုံးကဗျာတွေ ဆိုတဲ့ tag ကိုသိလိုက်ရကတည်းက ခေါင်းထဲကိုပြေးဝင်လာခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးပါ.။ ဖတ်ဖူးသမျှ တစ်ပုဒ်မကျန်ကြိုက်တဲ့ ဆရာကြီးရဲ့ကဗျာတွေထဲကမှ.. အကြိုက်ဆုံးများစွာတွေထဲကမှ တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါ တယ်။ ၁၉၃၅ခုနှစ်ဆိုတော့ ကျွန်မတို့နိုင်ငံ.. တိုင်းတစ်ပါးရဲ့လက်အောက်မှာ လွတ်လပ်ရေးမရသေးတဲ့ ကာလတွေပေါ့နော်.၊ ဘာတွေ..ဘယ်လောက်ထိတ်လန့်စရာ..အခြေအနေတွေဖြစ်နေခဲ့ရသလဲ..။ ဘာကြောင့်များ.. ဆရာကြီးက စိုးရိမ်တကြီး...တပ်လှန့်နိုးဆော်ခဲ့ရလဲ....
၁၉၀၇ခု ဧပြီလ(၁၂)ရက် နေ့မှာမွေးဖွားပြီး၊ ၁၉၉ဝပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၆ရက်နေ့မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ ဆရာကြီးဟာ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း သူဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့သမိုင်းကြောင်း တစ်လျှောက်လုံး နောက်တစ်ယောက်အတူ မရှိနိုင်တော့တဲ့ စာပေအနုပညာ အတတ်ပညာသမားတစ်ယောက် အဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့တာပါ..။ ဆရာကြီးရဲ့ ကဗျာတွေကိုတစ်ပုဒ်မှ မဖတ်ဖူးပဲ ဒီကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပဲ ဖတ်မိရင်တောင် ဒီစာဆိုကြီးရဲ့ တိုင်းပြည် နဲ့ လူမျိုးအပေါ်ထားရှိတဲ့ ကြီးမားနက်ရှိုင်းလွန်းတဲ့ စေတနာ၊ မေတ္တာတရားတွေကို ကြည်ညိုလေးစားဖွယ်ရာ တွေ့ရှိနိုင်တယ်လို့ ထင်လို့...ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။
“ကိုယ့်မှာမှ ဘာမှမရှိသေးဘူး၊ သူများပေးချင်တာက အရင်ပဲကိုး။ ကိုယ့်မှာအရင်ရှိအောင် လုပ်ကြစေချင်တယ်။” “ကိုယ့်မှာရှိပြီးမှ သူများပေးရတာ ကောင်းတယ်။ စာများများ ဖတ်ကြစေချင်တယ်။” ဆိုတဲ့ ဆရာကြီးရဲ့ဆုံးမ စကားလေးကိုလဲ.. လက်ဆင့်ကမ်းဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်..။
ငါအရက်မူး ပြန်လာတိုင်း ပြန်လာတိုင်း
သူတို့သောက်တဲ့ ရေကို သူတို့နှာခေါင်းရှုံ့နေကျ၊
သူတို့ဆောက်တဲ့ အဆောက်အအုံကို သူတို့သည်းညည်းမခံနိုင်ကြဘူး
မင်း ငါ့အရက်နံ့ကို ပျူပျူငှာငှာ လက်ခံနေကျ၊
အရက်သမား ငါ့ကို အသိအမှတ်ပြုနေကျ။
တာဝန်အရလို့ မင်းစိတ်မှာ မထားမရှိတာ
ငါ မင်းကို အသားကောင်းကောင်း မကျွေးခဲ့ဘူး
မင်းမြေကြီးကို တူးတူးပြီး ဆော့တတ်တာလေ
ငါက မင်းရှေ့ကိုကျော်ပြီး ခဲလုံးလေးတွေ ပစ်တယ်လေ။
တအူးအူး တအုအုနဲ့ မင်းအူးမြူးနေတာ
ငါ့ကို ဆောင့်ဆောင့် တိုးဝှေ့နေကျလေ
မင်းလျှာကြီးနဲ့ ငါ့ကို မြန်မြန်လျက်တယ်
ငါ့မေတ္တာကို မွတ်သိပ်ကြောင်း ပြနေကျအရောင်
ငါအခု ဒါကို မင်းလိုမွတ်သိပ်ရပြီ။
မင်းမှာ အသည်းနှလုံးရှိတာ ငါသိပါပြီ။
မုန့်ပဲသရေစာလေး မင်းကို ကျွေးတာတောင်
မုန့်ကလေး မင်းကို မြှောက်ပြ
(တကယ်တော့ မေတ္တာဆိုတာ ဖုန်ထဲက မုန့်ကလေးပါလားလို့ ငါမသိလိုက်ခဲ့ဘူးကွယ်)။
ဂျုံးနီရယ် ။ ။
ကျန်ခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ(၃)ရက်နေ့က ဆရာမောင်ချောနွယ်ကွယ်လွန်တာ ၆နှစ်တိတိပြည့်ခဲ့ပါပြီ.။
အို.. တကယ်တော့ ဆရာပြောခဲ့သလို..
ဆရာမောင်ချောနွယ်ရဲ့ ကဗျာတွေကလဲ.. ဘယ်အပုဒ်လေးကို ဆွဲထုတ်ပြရမှန်းမသိအောင်.. နှစ်သက်ရတာတွေချည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအထဲက ဂျုံးနီဆိုတဲ့ ကဗျာ လေးကိုပဲ..ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်..။
သေဆုံးကာနီး နောက်ဆုံးထွက်သက်ကို လုရှုနေရတဲ့အချိန်မှာ တမ်းတမိတဲ့အရာဟာ.. ခွေးတစ်ကောင်တဲ့လေ
ဖုန်တွေပေနေတဲ့ မေတ္တာတရားတွေ.. သင်ပေးခဲ့ဖူးသလား..၊
သင်ရခဲ့ဖူးသလား.. သင့်မှာ ဆုံးရှုံးနေရတာတွေ သိပ်များလာရင်.. ဂျုံးနီတစ်ကောင်လောက် စိတ်ကူးထဲမှာဖြစ်ဖြစ် မွေးမကြည့်သင့်ပေဘူးလား....။
ချက်ချင်းအပင်းဖြစ် လတ္တံ့။ ။
စိတ်ထဲက တစ်ခါတစ်လေ.. အသံတွေထွက်ပြီး ရွတ်ရွတ်နေမိတဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရွတ်မိတိုင်းလဲ.. ကြက်သီးမွေးညှင်းတွေ ထမိတတ်ပါတယ်..။ ဆရာမောင်လင်းခက်.. ဘယ်လိုဝိဥာဉ်မှော်မျိုးတွေနဲ့ ရေးထားရစ် ခဲ့လဲ.. တစ်သက်လုံးစာရေးတာ တစ်ခုတည်းနဲ့ တကယ်ရပ်တည်သွားတဲ့ ကဗျာဆရာပါ..။ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ တည့်တည့်မှာမှ.. ကွယ်လွန်သွားရရှာသူဖြစ်ပြီး.. ကဗျာဆရာမကြီး မအိကတော့
“ဒါတွေဟာ မမြဲတဲ့အနိစ္စလို့ ပြဆိုချင်တာလား..”
နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ မှာ မှ တဲ့ ကွာ...
တမင်တကာကြီး ရက် ရက် စက် စက်။” လို့ ကွယ်လွန်ခြင်း ဆယ်နှစ်မြောက်မှာ.. လွမ်းဆွတ်ကြေကွဲခဲ့ပါတယ်..။
ကဲ.. ကိုယ့်ကိုဆက်tagတဲ့.. အိမ်မက်ရှင်ရော.. ဒီtagကိုပို့လိုက်တဲ့.. လင်းဒီပကိုရော ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေနပ်နှစ်သက်နိုင်ကြမယ်လို့လဲ..မျှော်လင့်မိပါတယ်။ အစကတည်းက ခံစားမိရာ ကဏ္ဍလေးကနေ.. နှစ်သက်တဲ့ ကဗျာလေးတွေကို ရေးဖို့ရှိနေတဲ့အစီအစဉ်ကို ခုတော့.. လှလှပပလေး ဖွင့်လိုက်နိုင်ပြီထင်ပါရဲ့...။
ဒေါင်လိုက် ဖြတ်တိုက်သွားတဲ့ လေ
၀င်လုဆဲဆဲနေရောင်ကို တိမ်တောင်တွေက အသနားခံနေကြတာပေါ့...။
သွင်သွင်ရမ်းရမ်း ၀ံ့စားနေတဲ့ တိုက်ခတ် လေထဲကို ကျွန်တော် သက်ပြင်းတွေ မှုတ်မှုတ်ထည့်နေမိခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်က ဖေဖေ့ နှလုံးသားထောင့်စွန်းမှာ စိုက်ဝင်နေတဲ့ ဆူးရိုင်းတစ်ချောင်းပါ ဖေဖေ။ ဖေဖေ့ ညာ လက်ရုံးးကနေ စီးဆင်းလာတဲ့ကျွန်တော့် ဖြစ်တည်မှုဟာ အဖေ့အတွက် အင်အားတစ်ခုလည်း ဖြစ်မလာခဲ့ဖူးဘူး၊ ဆောင်ဓါး တစ်လက်လည်း ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး..။
သိပ်ကို တိကျသေချာတဲ့ ၊ စေ့စပ်ထက်မြက်တဲ့ ဖေဖေ့ရဲ့ ချွင်းချက်တစ်ခုလို ကျွန်တော့် ခပ်ရော်ရော် အခင်းအကျင်းတွေကို ကျွန်တော့် စိတ်ညွှန်ရာ အသွင်အပြင် အတိုင်း ဆင်ယင်မိခဲ့တာ. .. ..
ကျွန်တော့် ကျောပိုးအိတ်ထဲမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ အာခံမာနတွေအပြင် ၊ ကျွန်တော် ဖတ်တဲ့ ဖေဖေမကြိုက်တဲ့ စာအုပ် တွေအပြင် ၊ အနုပညာတွေ တနင့်တပိုးပါလာခဲ့တဲ့အကြောင်း ကျွန်တော်က ရဲရင့် ၀ံ့ကြွား နေခဲဖူ့းတယ်လေ..။
စက်တပ်ထားတဲ့ရေယဉ်ရဲ့ ဦးခေါင်းတွေက မြားတစ်စင်းလိုပါပဲ...။
သူထိုးခွဲဖိုးကြိုးစားနေတဲ့ မြစ်ရဲ့ ရင်ဘတ်မှာ လှိုင်း တံပိုး ဒဏ်ရာတွေနဲ့ နာကျင်လို့..။
ဇက်ခွံ့မခံတဲ့ မြင်းရိုင်းတစ်ကောင်လို ဖေဖေ့ရင်ဝကို စုန်ကန်ပြီး ကျွန်တော် ကစုန်စိုင်းပြီးထွက်လာခဲ့တဲ့ နေ့တွေ ညတွေ လေ... ။
ကျွန်တော်က အိပ်တန်းပြန်စရာမရှိတဲ့ သင်းကွဲငှက်တစ်ကောင်လို...၊ ကျွန်တော်က ရေနည်းနည်းလေးထဲမှာ အလန့်တကြားကူးခတ်နေရတဲ့ ငါးဖျင်း တစ်ကောင်လို.....၊
မြို့ကြီးပြကြီးတွေက ရက်စက်တယ်လို့ ကျွန်တော် ဖေဖေ့ကို ပြောမပြချင်ပါဘူး ...။
ဟိုး...ဧရာဝတီကို ကန့်လန့်ဖြတ်ပြီး ပျံသန်းနေတဲ့ ငှက်မည်းလေးလိုနေမှာပါ...၊ အတောင်သိပ် ညောင်း လာလို့ မှ ခဏလေးတောင် ရပ်ပစ်လို့ မရတဲ့ ဘ၀ပေါ့ ...။
ဒါတောင် ငှက်တွေက လေဟုန်စီးလို့ရသေးရဲ့..၊ လူတွေက ငွေဟုန် စီးနိုင်မှ လိုရာရောက်နိုင်တော့လေ..။ ငွေကြေးဆိုတာ စိတ်တိမ်းပွေ အောင်ပြုစားတတ်တဲ့ စုန်းကဝေလို့ ကျွန်တော်က ကြွေးကျော်ခဲ့ဘူးတော့……...
ကျွန်တော်က ဒီအကြောင်းတွေကို ဖေဖေ့ကို ဘယ်ပြောပြမှာလည်း ဖေဖေရယ်...။
ဖေဖေကရော ကျွန်တော်ပြောရင် နားထောင်ချင်ပါ့ မလား..၊
အို......နားရော ထောင်နိုင်ပါ တော့ မ လား...
တောက်..... မိုက်မဲရက်စက်လိုက်တဲ့ အတွေး ကွာ...။
ကျွန်တော့် ရင်တွေ ပူပြင်းလောင်မြိုက်နေလိုက်တာ..။
ကျွန်တော့် နှလုံးသွေးတွေ တဒိတ်ဒိတ် ဆူဝေနေလိုက်တာ…။
ဒီအချိန်မျိုးမှာ ကျွန်တော် အလိုချင်အတောင့်တဆုံး၊ ဘာနဲ့ပဲ လဲပစ်ရ လဲပစ်ရလို့ ကျွန်တော် ကျိမ်းသေနေ မိတဲ့ ဆုလာဘ် ဒါမှမဟုတ် ဆုတောင်းဟာ ဘာဖြစ်လိမ့်မယ် ထင်ပါသလဲ ဖေဖေ..။
ဖေဖေ ခေါင်းသိပ်မာတဲ့ကောင်လို့ ပြောပြောနေတဲ့ အနုပညာမာနခပ်ကြီးကြီးနဲ့ ဖေဖေ့ သားကြီး လေ...
သိပ်ကိုနာကျင်ညောင်းညာနေတဲ့ အတောင်ပံကို အစွမ်းကုန်ဖွင့်ပြီး............
အပူတပြင်း ပြန်လာနေလေရဲ့...။ ။
ဧရာဝတီ့ရဲ့ရေတွေ က နှစ်ခါပြန်မစီးကြပေမယ့်.. ၊
ကျွန်တော့်စိတ်တွေက ဧရာဝတီလိုတသွင်သွင်နဲ့ပေမယ့်..၊ နောက်ပြန်စီးနေခဲပါ့တယ်...။
တကယ် တော့ နှစ် နှစ်ဆိုတာ သိပ်မကြာပေမယ့် တော်တော်တော့ ကြာသွားခဲ့ပါပြီ...။
ကျွန်တော် သိပ်ကြောက်တဲ့ ကျွန်တော့်အတန်းပိုင်ဆရာက ကြောက်ရတဲ့ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဟာ ကျွန်တော့်ဖေဖေပေါ့..။
ပင်စင်စားဖေဖေ့ကို လာလာ ဂါရ၀ပြုတတ်တဲ့ ဖေဖေ့တပည့် ကျွန်တော့် ဆရာ မြင်သွားမှာစိုးလို့ ကျွန်တော် ပုန်းနေတိုင်း ဖေဖေက အခေါ်ခိုင်းရင် ကျွန်တော်သိပ်စိတ်တိုတတ်တယ်။
တကယ်ဆိုရင်လည်း အဲဒီ့က စခဲ့တယ်။
ကျွန်တော့်ကို ဖေဖေ့ နှလုံးအိမ်ထဲက ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများပါမယ်ထင်ရတဲ့ ခေါင်းမာစိတ်တွေနဲ့ ၊ ရာခိုင်နှုန်း တော်တော်နည်းနည်းပဲ ပါဝင်မှာသေချာတဲ့ အနုပညာစိတ်တွေနဲ့ တိတိကျကျ ဖွဲ့တည်ခဲ့တယ် ထင်ပါရဲ့ ဖေဖေ။
ဟေ့ ငါ လည်း အနုပညာသိပ်ဝါသနာပါခဲ့တဲ့ ကောင်ပါ...၊ မယ်ဒလင်များတီးနေရမယ်ဆို ထမင်းမေ့ဟင်းမေ့ ၊
ဒါပေမယ့် ဘ၀အတွက် အဓိကနဲ့ သာမည ကိုခွဲခြားသိတယ် ၊ သိလောက်တဲ့ ဦးဏှောက်လည်းပါတယ်။
မဟုတ်ဘူးဖေဖေ..ကျွန်တော်ပြောပြောနေတဲ့ ကျွန်တော့်အနုပညာဆိုတာ ကျွန်တော် မမွေးခင်ကတည်းက ကျွန်တော့်သန္ဓေစိတ်မှာ ပူးဝင်စွဲကပ်နေတာဖြစ်ပြီး ၊ ကျွန်တော် သေသွားရင်တောင် ထားရစ်ခဲ့မယ့်အရာ ဖေဖေရဲ့..။
ကျွန်တော့်ရဲ့ လက်စလက်န မှန်သမျှကို ကျွန်တော်သိပ်ကြောက်ရတဲ့ ၊ ကျွန်တော့်ဖေဖေ့ကို အခု ထက်ထိ ကြောက်နေတဲ့ ဆရာက တဆင့် သိသိနေရကတည်းက ၊ တနည်း ကျွန်တော် အထက်တန်းကျောင်းသားဘ၀ကတည်းက ကဗျာ ဆိုတာဟာ ကျွန်တော်နဲ့တွဲစပ်ကြည့်ရင် သိပ်မျက်မုန်းကျိုးစရာ အရာအဖြစ် ဖေဖေ့ဆီမှာ ဖြစ်ပျက်နေခဲ့ပြီ..။
ဘယ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတက္ကသိုလ်မှ မ၀င်ပဲ ဆယ်တန်းကို လှုပ်လီလှုပ်လဲ့ အောင်မြင်လိုက်ခြင်းက ကျွန်တော်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဖေဖေ့အတွက် ပထမဆုံး အရှိုက်ထဲအထိ နင့်နည်းပူလောင်သွားစေရှာမယ့် နာကျင်ဒေါသပေါ့..။
စက်မှုသိပ္ပံဝင်ခွင့်ရတဲ့နေ့ကဆို ဖေဖေဟာ အချိန်စေ့ကာနီးမှ ပင်နယ်တီကန်ခွင့်ရလိုက်တဲ့ ဘောလုံးသမားလို အင်းအား အသစ်တွေနဲ့ ရွှင်လန်းတက်ကြွလို့ရယ်လေ..။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ဆာလောင်မှုတွေက အဲဒီ့စာမျက်နှာရောက်မှ ရပ်တန့်သွားခဲ့တာ ဖေဖေရဲ့..။ ကျွန်တော့် အသက်ဓါတ်ကို ကျွန်တော့် စကားလုံးတွေနဲ့ မျှားနေချိန်ဟာ အနေသာဆုံးပဲ..။
အဲဒီ့လိုပြောနေရတာကိုက တော်တော် ချိုနေခဲ့တယ်...။
ညစ်နောက်နေတဲ့ ရေပြင်က လှိုင်းဂရက်တွေကို အံတုပြီး ငါးဖမ်းပိုက်ဖေါ်နေတဲ့ လူ ဟာ ဘယ်လို သားသမီးမျိုးရဲ့ အဖေပါလိမ့်..။
ဟေ့လူ.....ဒီမှာ၊ ခင်ဗျား တစ်ဦးတည်းသော သားလေးက ကဗျာတွေ စာတွေချည်းရေးနေချင်ပြီး တခြားဘာကို ထူးချွန်ချေငံအောင် မလုပ်ချင် တော့ဘူးဆိုရင် ခင်ဗျားဘယ့်နှယ်လုပ်မလဲ..။
ပညာ သိပ်မတတ်လောက်တဲ့ ခင်ဗျားက ဘယ်လိုတွေ ဆုံးမ မလဲ..။
မဂ္ဂဇင်းမှာပါလာတဲ့ ကဗျာတွေကို ဒါကျုပ်သားရေးထားတာဗျလို့ တစ်ခါလောက်လေးဖြစ်ဖြစ် ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွား ဖေါ် ရရင် သူ သိပ်ကျေနပ်ရှာမှာ.ဗျာ.။
ကျွန်တော်က ရင်ခုန်သံတွေ တိမ်းတိမ်းပွေပွေမှာ ကောင်မလေးရဲ့ ဆံယဉ်နွဲ့နွဲ့ကို ကျွန်တော့် မျက်တောင်စင်းစင်းတွေနဲ့ ယှက်နွယ်နှောင်ဖွဲ့ချင်လာတော့ ကဗျာဆရာပိုပီသလာတယ်...။
အသည်းကွဲရတာကို အရသာတစ်ခုလို စွဲလမ်းယစ်မူးနေခဲ့တယ်..။
မတော်တဆအသည်းကွဲရာမှ ခြေချော်လက်ချော် ကဗျာဆရာဖြစ်လာတယ်လို့ ဆရာသစ္စာနီကပြောဘူးတယ်။၊ ကျွန်တော့် မှာတော့ ကဗျာဆရာ အဖြစ်ကြောင့် မတော်တဆ အသည်းကွဲခြင်းတွေနဲ့ ခြေချော်လက်ချော် ဖြစ်နေခဲ့ရတာ......။
ဟေ့ကောင် ရေးရင်လည်းလုံးခြင်းရေးပေါ့ကွာ စီးပွားလည်းဖြစ်တယ် ၊နာမည်လည်းကြီးမယ်..၊ မင်းတို့ ဒီခေတ် ကိုယ့်ဘာသာ တစ်ယောက် တည်းနားလည်အောင် ရေးထားတဲ့ကဗျာမျိုးကို......။
မေးကြည့်ကွာ ၊ မင်း စာအုပ်ဆိုင် အ ၀ ကနေ စောင့်ပြီး စာဖတ်သူတွေကို မေးကြည့်လိုက် ..၊ မင်းကဗျာဆရာတွေကို သူတို့ ဘယ်နှစ်ယောက်သိကြလဲ လို့..။
ဇော်ဂျီကွာ ၊ မင်းသုဝဏ်ကွာ သိကြမယ် ၊ သိမှာပေါ့ သူတို့ လူနားလည်အောင်ရေးတာကိုး..။
ဖေဖေ့ ရာသီဥတုက ကဗျာဆိုတာထက် ခေတ်ပေါ်ကဗျာပေါ်မှာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး မည်းပြို့နေခဲ့တယ်..။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တဆတ်ဆတ်ပူနွေးနီမြန်းနေတဲ့ နှလုံးသားတွေကို ဖေဖေ ဘယ်လိုမှ မကြည့်စိမ့်ခဲ့ဘူး..။ ဖေဖေရယ် ရှေးကဗျာတွေကိုတောင် ဘယ်မှာ နားလည်နိုင်ကြလို့လည်း ၊ ခက်ဆစ်တွေဖွင့်ပေးထားရတာ...၊ ကျွန်တော်တို့ ကဗျာတွေမှာ လည်း ခက်စစ်ဖွင့်ပေးမှ သိလို့ရမယ့် အံဝှက်တွေရှိတယ်..။
အလှဆင်ဖွဲ့နွဲ့ထားတဲ့ အလင်္ကာတွေရှိတယ် ၊ခန့်ထည်ဝံ့ကားနေတဲ့ ဂုဏ် မြောက်မှုတွေရှိတယ်..။
ကျွန်တော်တို့က ပုံစံခွက်တွေထဲမှာ ၀င်ထိုင်မနေချင်ကြပဲ ၊ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင် ပုံစံခွက် တွေကို ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်တီထွင်ကြည့်ချင်တာ..။
ကျွန်တော်တို့ စိတ်ကူးစားကျက်ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့စိတ်တွေကို အချုပ်အနှော မရှိလွှတ်ပေး လိုက်ကြတာ..။ ဘာကွ ။ ဘာ အသစ်လဲ..။
တမင်လော်မာထားတဲ့စကားစုတွေကိုလား ....... စတဲ့ ဖေဖေ့ မိုးချိမ်းသံအောက်မှာ ၊ ဖေဖေ့ စွဲချက်တွေ အောက်မှာ ကျွန်တော် နဲ့ ခေတ်ပေါ်ကဗျာဟာ လက်ချင်းမြဲမြဲချိတ်ပြီး အလူးလူးအလိမ့်လိမ့် ချစ်ခင်မြတ်နိုးလို့…...…။
မြန်မာပြည်က လက်ရှိလူဦးရေ သန်းခြောက်ဆယ်ကျော်ထဲမှာ ခေတ်ပေါ်ကဗျာဆရာဘယ်နှစ်ယောက် ပါလိမ့်မလည်း...။
သိပ်ကို သေးငယ်ပါးရှားတဲ့ ကိန်းဂဏန်းလေးထဲမှာ ကျွန်တော်က ဒုလ္လဘတစ်ခုလိုရခဲထားတဲ့ ကဗျာဆရာပါ..။ သေချာတယ်ဖေဖေ... ကျွန်တော်ဟာ လုံးဝဥဿုံ ကဗျာဆရာ..။
ဟိုးဝေးဝေးမှာ ခပ်ရေးရေးမြင်နေရတာ ကျွန်တော့်ဖေဖေရှိတဲ့မြို့ပေါ့..။
ကျွန်တော်ဖေဖေ့ကို သိပ်ကိုကြည်ညိုလေးစားတဲ့သူတွေနဲ့ ကျွန်တော့်မိသားစုတွေ နေတဲ့မြို့ပေါ့....။
အခု ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးရှိမယ်မှန်းမသိတဲ့ ကျွန်တော့်ဖေဖေ့ကျန်းမာရေးနဲ့ ကျွန်တော့်မမကြီးရဲ့ သောကတွေကို ထမ်းပိုး ပေးထားတဲ့မြို့ပေါ့..။
သင်္ဘောဆိုက်ချိန်တိုင်း ငံ့လင့်တကြီးကျွန်တော့်ကို မျှော်မျှော်နေရှာတဲ့ကျွန်တော့်မြို့လေးရဲ့ အလယ်လောက်မှာ လှမ်းမြင်နေရတဲ့ မိုက်ကရိုဝေ့ဖ် ဓါတ်တိုင်ကြီးနားကို ကျွန်တော်ငေးရီမိလိုက်တော့ ရင်တွေတဒိတ်ဒိတ်နေအောင်ခုန် တက်လာခဲ့တယ်။ ဖေဖေ ဖေဖေ ဖေဖေ.....ရယ်။ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးပူလောင်နေလိုက်တာ…။
ငယ်ငယ်တုန်းက ဖေဖေ့ ဇက်ပေါ်ခွရင်း၊ အဲဒီ့ ဓါတ်တိုင်ကြီးကို လက်ညှိူးလှမ်းထိုးရင်း သားတို့အိမ် သားတို့အိမ် လို့ ခုန်ဆွ ခုန်ဆွ လုပ်ပြီး အော်နေ ရတာ သိပ်ပျော်စရာကောင်းတာပဲ…....။
ဖေဖေ......၊ ဖေဖေဟာ ကျွန်တော့် ကို ဘယ်တုန်းကမှ လေးလံ မနေခဲ့ဘူးနော်။
အခု ကျွန်တော်က လေထန်ကုန်းထောင့်က စားပွဲမှာ မရဲတရဲ ထိုင်ရဲနေပြီဖြစ်တဲ့ ၊ ဟိုစာအုပ် ဒီစာအုပ် ဖျောက်ဖျောက် ခြားခြား ပါခွင့်ရနေပြီဖြစ်တဲ့ ကဗျာဆရာရင့်မကြီးဖြစ်နေပြီ..ဖေဖေ ။
ကျွန်တော့်ခမျာ ကောင်လေး မင်းကဗျာမဆိုးဘူးကွဆိုတဲ့ အသံကို ဆုလာဒ်တစ်ခုလို
သား မင်းဘယ်လိုစား ဘယ်လိုနေလဲ လို့ ဖေဖေစိုးရိမ်တကြီး မေးချင်နေမှာပါ...။
စာပေနဲ့ပဲ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုမယ်လို့ ဖေဖေ့ကို ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောထားခဲ့တဲ့ ဖေဖေ့သားက တစ်ခါတစ်လေ ဂျာနယ်တွေကို လက်နဲ့ပွေ့ပြီး ကားဂိတ်တွေမှာ ရောင်းတယ်ဖေဖေ…။
တစ်ခါတစ်လေ စာအုပ်လိုက်ဖြန့်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ကူညီပေးပြီး ဘော်ဒါကြေးယူတယ်ဖေဖေ…..။ တစ်ခါတစ်လေ...မဂ္ဂဇင်းတိုက်တစ်ခုခုမှာများ အလုပ်ရမလားလို့ စုံစမ်း နေတတ်တယ်ဖေဖေ..။
တစ်ခါတစ်လေ... တစ်ချို့ တစ်ခါတစ်လေ မှာ ကျွန်တော်ဟာ ကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော်ချော့မြူနေရတယ် ။ တစ်ခါတစ်လေ တော်တော်များများမှာတော့ ကျွန်တော်ဟာ ကျွန်တော်ပျောက်လို့ရှာနေရတော့တာပဲ ဖေဖေ..။ တော်တော်များများတစ်ခါတစ်လေတွေမှာ ကျွန်တော်ဟာ ဖေဖေလုံးဝမကြိုက်တဲ့ အရက်ကို တော်တော် လေးကြိုက်နေမိခဲ့ပြီး ၊ အဲဒီ့ တစ်ခါ တစ်လေ တိုင်းမှာ ဖေဖေ ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့တဲ့ အရက်ဖိုးလိုက်လိုက်တောင်းတတ်တဲ့ ကဗျာဆရာတော့ လုံးဝမဖြစ်စေရဘူးလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အာမခံ နေတတ်တယ်ဖေဖေ..။
အနုပညာဆိုတာ အစာခံနိုင်ခြင်းသဒ္ဓိ ၊ ခေတ်ပေါ်”ကဗျာဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ နှလုံးသားသိုက်ကို ညွှန်းပြထားတဲ့ ၀ှက်စာတွေ.....။.
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်က ဆံပင်တွေကိုတော့ သေသေသပ်သပ်ညှပ်လာမိခဲ့ဖို့ ကောင်းတာပါ..။
အထိမ်းအသိမ်းမဲ့ခုန်ရမ်းနေတဲ့ နှလုံးအိမ်ကို ကျောပိုးအိပ်ကိုင်ထားတဲ့လက်နဲ့ ရောနှောဖိထားလိုက်တော့ နည်းနည်းနေသာသွားသလိုရယ် .။
ကျွန်တော် ခြေလှမ်းတွေကို ရှေ့ ဆက်မလှမ်းဝံ့လောက်အောင် တုန်လှုပ်နေမိတယ်။
အသည်းအသန်ဆို တာ ဘယ်လောက်အထိဆိုးဝါးတဲ့ အခြေအနေပါလိမ့်.....။
ကျွန်တော်ဆီရောက်နှင့်နေတဲ့ သတင်းနဲ့ ကျွန်တော်သိခွင့်ရလိုက်ချိန်တို့ရဲ့ ကြားကွာဟချက်မှာ ဘာတွေဟာ ဘယ်လောက်အထိ ရက်ရက်စက်စက် ပြောင်းလဲ သွား ခဲ့ပြီလဲ.......။
ကမျူးရဲ့ မာဆိုးဟာ သူ့အမေဆုံးတာကို ဘယ်လိုလေးမှ မခံစားရသလိုနေနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့..။
ကျွန်တော်ဒီလို တွေးလိုက်မိတာကို ဖေဖေသာသိရင် ဘယ်လောက် ကြေကွဲသွားရှာမလဲ..။
ဒိဋ္ဌိတွေကို ဆရာတင်ကိုးကွယ်နေတဲ့ကောင်လို့ ဖေဖေပြောဦးတော့မှာပဲ..။
သား.. မင်းဖတ်ဖတ်နေတဲ့ ယန်းပေါလ်ဆတ်တို့ ၊ ကမျူးတို့ ။
စဉ်းစားကြည့်စမ်း...၊ သူတို့ဟာ သိပ်သနားစရာ ကောင်းတယ် ၊ သူတို့ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေး အစစအရာရာ အရှုပ်အထွေးတွေကြားထဲမှာလူဖြစ်လာကြတယ်..။
သူတို့ဘာကိုမှ စိတ်ချလက်ချ မယုံရဲကြဘူး..။
သူတို့အတွက်သေခြင်းတရားဆိုတာ အမြင့်မားဆုံးထွက်ပေါက်လို့ ထင်မြင် နေကြတယ်..။ ဖေဖေ့အထင်ပေါ့ကွာ....။
ကံကံ၏ အကျိုးဆိုတာ သူတို့သိခွင့်မရရှာဘူး..၊ ဘ၀တွေရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရာအစစ်အမှန်ဆိုတဲ့ ရုပ်နာမ်နှစ်ပါးစလုံးချုပ်ငြိမ်းရာ သန္တိသုခ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ကို လည်း မသိနိုင်ရှာကြဘူး၊ အဲဒီ့ နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိူင်တဲ့နည်းလမ်း ရှိတယ်ဆိုတာလည်း မသိကြရှာဘူး၊။
ဒါကြောင့်သူတို့မှာ အမြဲ ကျဉ်းထဲ ကြပ်ထဲမှာ ထွက်ပေါက်မရှိဖြစ်နရရှာတာ...။
သူတို့ထွက်ပေါက်ကို သူတို့ဘာသာ ရှာဖွေနေရတာ…...။
မဟုတ်ဘူးဖေဖေ ကျွန်တော်က သူတို့ဝိဥာဉ်မှာပျော်ဝင်တောက်စားနေတဲ့ သူတို့ရဲ့ အနုပညာကို မြတ်နိုးတာ..၊ သူတို့ရဲ့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းတွေ၊ သူတို့ရဲ့ အသစ်တွေ ကို လေးစားချီးကျူးတာ၊ အားကျတာ..။ မင်းချိတ်ထားတဲ့ ဒီပန်းချီကားကိုဆွဲတဲ့ ဗင်းဆင့်ဗန်ဂိုးဆိုရင် ကြည့်ကွာ ..။
သူ့တစ်သက်ဘယ်သူ့ကိုမှ ကောင်းကျိုးမပေးခဲ့ဖူးဘူး ၊ဘယ်လောက် ကြောင်သလဲဆိုရင် သူ့အဖော်မလေးကို နားရွက်ဖြတ်ပေးတယ်တဲ့...။
ကဗျာဆရာရှယ်လီကွာ၊ ဆစ်ဗီယာပသာ့ပ်ကွာ အဖန်ငါးရာ ငါးကမ္ဘာမကြောက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေကြတဲ့သူတွေ...၊ ဥပစ္ဆေဒကံနဲ့ သေကုန်ကြရတဲ့သူတွေ…..။
မဟုတ်ဘူးဖေဖေရဲ့...... မဟုတ်သေးဘူးဖေဖေရဲ့...... ဖေဖေက ကျွန်တော့်ကို အနိုင်ရဖို့အတွက်လား ၊ ကျွန်တော့်ကို နားသွင်းဖျောင်းဖျဖို့အတွက်လား၊ ကျွန်တော့်ကို ကယ်ဆယ်ဖို့အတွက်လား ၊ အဲဒီ့ အနုပညာတွေထဲမှာ အရူးအမူး ဒလိမ့်ခေါက်ကွေးမျောပါနေတဲ့ သူ့သားရဲ့ ၀ဋ်နာကံနာတွေကို မချိတင်ကဲလွန်းလို့ လား...။
သူတို့ဟာ အနုပညာနဲ့ ဘ၀ကို လဲလှယ်ကြသူတွေ…..။
အနုပညာထက်ဘာကိုမှ တန်ဘိုး မထားကြသူတွေ...။
သူတို့အနုပညာက သူတို့ကို စီးမိသွားကြသူတွေ...။
သူတို့ဟာ အဲဒီ့လိုဖြစ်ခဲ့ကြတာကို ဘယ်တော့မှ နောင်တ မရမယ့်သူတွေ..။
သူတို့က ယုံကြည်ချက်ကို သွေးနဲ့ ဆေးချယ်ပြသူတွေ...။
သူတို့ဟာ အနုပညာကို လက်နက်လိုသဘောထားပြီး ၊ အသက်ကို ခဲယမ်းလို့ သတ်မှတ်ထားကြ သူတွေလေ...။ အဲဒီ့လို ကျွန်တော်ကို အကြောက်အကန် ဆယ်ယူချင်နေတဲ့ ဖေဖေခမျာ၊ ကျွန်တော် ဒုတိယနှစ်စာမေးပွဲ ကို နှစ်နှစ်ဆက်ကျအောင် ဖြေလိုက်တဲ့ အချိန်မှာတော့ ပွဲသိမ်းထိုးချခံလိုက်ရသူလို ၊ သူ့တန်ဘိုးကြီးပစ္စည်းတွေ အားလုံးကို တစ်ထိုင်တည်း မီးရှို့ခံလိုက်ရသလို ၊ သူ့ မနက်ဖန်တွေအားလုံး စုံးစုံးချုပ်သွားသလို....။
အို အဲဒီ့နေ့က ဖေဖေ့မျက်နှာကို ကျွန်တော် ပြန်မြင်ယောင်မကြည့်ရဲဘူးဖေဖေ..။
ကျွန်တော်ဟာ ဖေဖေ့ ကောင်းကင်က တစ်ပွင့်တည်းသောကြယ်ပေမယ့် ဖေဖေ လိုချင်သလို မထွန်းလင်း နိုင်ခဲ့ပါလား .။
ဖေဖေ အခုကျွန်တော့်စိတ်တွေကို ဘာကမှ မကုစားနိုင်လောက်အောင် လောင်မြိုက်နေခဲ့ပြီ..။
ငါ သာဖေဖေ ဖြစ်စေချင်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာကြီးတစ်ယောင်ဖြစ်ပေးခဲ့ရင်လို့ ကျွန်တော်..... တွေး ကြည့် နေ မိ ပါ ပြီ ကော ဖေဖေ....။
ကျွန်တော့်ကို တစ်ယောက်ယောက်က မြင်တွေ့ပြီး ဟေ့ကောင် မင်းအဖေလို့ကြိုပြီး သတင်းကြိုပေးနိုင်တဲ့ နေရာက ကျွန်တော်မသွားရဲဘူး ။
သြော် ကျွန်တော့ ကိုရော ဘယ်သူက အလွယ်တကူမှတ်မိမှာ မှတ်လို့ ....။
ကြည့်ပါဦး .....ဖေဖေ့ကျောင်းဝန်းထဲက ဖေဖေနဲ့ ကျွန်တော်အတူတူစိုက်ခဲ့ကြတဲ့ စိန်ပန်းပင်ကြီးတောင် အပွင့်တွေ အရိပ်တွေနဲ့..။
ညနေတိုင်းလမ်းလျောက်တတ်တဲ့ဖေဖေဟာ ဒီ စိန်ပန်းပင်အောက်ရောက်တိုင်း ကျွန်တာ့်ကို သတိရမိမှာ သေချာ လိုက်တာ..။
ဖေဖေ ဘယ်လောက်များရင်နာလိုက်ရမလဲ.......... ဒီအပင်အောက်မှာရပ်ပြီး ဖေဖေကအနှောင့်စုတ်သွားတဲ့ ကဗျာစာအုပ်ကိုနာနာကျည်းကျည်း ပြေးကောက်လိုက်တဲ့ ၊ ပေါက်တော့မယ့် မြွေတစ် ကောင် လို စူးစူး စိမ်းစိမ်း ပြန်ကြည့် လိုက်တဲ့ ၊ ဖေဖေ တော်တော့ဗျာ နားငြီးတယ်လို့ မူးစစနဲ့ ဒေါသတကြီးခံအော်လိုက်တဲ့ အနုပညာသည် သားလိမ္မာကြီးကို မြင်ယောင်နေမလား..။
ဒီကျောင်းကြီးမှာ အတန်းငယ်တွေတုန်းက ပထမက မဆင်းတမ်း ထက်မြက်ခဲ့တဲ့ ၊ သူ့အိမ်မက်တွေထဲက တစ်ဦးတည်းသော ဇာတ်လိုက်ဖြစ်တဲ့ ၊ သူ့ကိုယ် သူ အသစ်ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်လိုက်နိုင်မယ့် တံခါးအသစ်တစ်ချပ်လည်းဖြစ်တဲ့ ၊ သူမျှော်လင့်တကြီး ပျိုးထောင်ခဲ့ရတဲ့ မိတဆိုးသားလေးကိုမြင်ယောင်နေမလား..။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်ဟာ ဖေဖေ့အတွက် အပွင့် ကန်းနေတဲ့ ပန်းတစ်ပင်ပါ။
အရိပ် ခမ်းနေတဲ့ သစ်တစ်ပင်ပါ ။
အခု ဖေဖေ ဒီအပင်ကြီးအောက်မရောက်နိုင်တာ ဘယ်လောက်ကြာသွားခဲ့ပြီလဲ...။
အိမ်ကို မြင်သာလောက်တဲ့ လမ်းအကွေ့လေးကနေ ကျွန်တော် မရဲတရဲ ခိုးကြည့်လိုက်မိတယ်။
တစ်ခုခုကိုများ မြင်လိုက်ရရင် ကျွန်တော် ရူးသွားမလား..။
ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော်လိုက်လို့မမီအောင်ကို မြန်ဆန်သွားလိုက်တာ..။ အိမ်ပေါ်ကို အပြေးတစ်ပိုင်း လှမ်းတက်လိုက်တဲ့ ခြေသံကြောင့် မမကြီးဆတ်ကနဲ တုန်သွားရှာတယ်…..။
လမ်းမဘက်ကို လှည့်ချထားတဲ့ ပက်လက်ကုလားထိုင်မှာ ဖေဖေရယ် ၊ ကျွန်တော့်ဖေဖေရယ်..။
ဘယ်လောက်ပဲပိန်လှီနေနေ ။ အို မျက်နှာတစ်ခြမ်းပဲ ရွဲ့ရွဲ့ ။
လဲ့ ကနဲ လင်း သွားတဲ့မျက်ဝန်းတွေက ဖေဖေ ကျွန်တော့်ကို ခွင့်လွှတ်လိုက်တာများလား
ဖေဖေ ၊ မျက်ရည်တွေမကျလိုက်ပါနဲ့ ဖေဖေရယ်..၊
ကျွန်တော်လိုကောင်မျိုးအတွက် ဖေဖေ မျက်ရည်မကျပါနဲ့ဖေဖေရယ်...။
အေးစက်နေတဲ့ ဖေဖေ့ခြေဖမိုးအစုံပေါ်ကို မျက်နှာအပ်လိုက်မိသလား
ကျွန်တော် ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုနေမိသလား
ဆောက်တည်ရာမရအောင် အဲဒီ့ ခဏမှာ ကျွန်တော် ရူးနှမ်းသွားမိပြီထင်ပါရဲ့..။
ဖေဖေ ကျွန်တော့်ကို နှုတ်တောင်မဆက်ချင်တော့ဘူးလား...ဟင်၊
ဖေဖေ့ တဆတ်ဆတ်လှုပ်ရွနေတဲ့ နှုတ်ခန်းအစုံက ကျွန်တော့်ကို စကားမပြောနိုင်လောက်အောင် နာကျည်းနေခဲ့ပြီလား
ကျွန်တော် နာငြီးတယ်ဗျာလို့ ဘယ်တော့မှ မပြောတော့ပါဘူး ဖေဖေ
ဖေဖေ့ကို ကျွန်တော် ဘယ်တော့မှ ခံမအော်တော့ပါဘူးဖေဖေ ရယ်..။
ဖေဖေ ဒီမှာ...တဲ့၊ ဒဏ်ရာရ သားကောင်တစ်ကောင် ညည်းတွားလိုက်သလိုပါပဲ ..၊ မမကြီးရယ်လေ...
အို မမကြီးက သူ့မျက်ရည်တွေသူမသုတ်နိုင်အားပဲ
ဖေဖေ့ ဘယ်လက်ရမ်းပေါ်ကို ကျောက်သင်ပုန်းလေးတင်လို့
ကျွန်တော့ ဖေဖေ ခမျာ... ၀ူး ၀ူး ၀ါး ၀ါး နဲ့ ။
ကျွန်တော် ဖတ်လို့ရရုံ လက်ရေး ကစဉ့်ကလျားလေးတွေနဲ့
တဆတ်ဆတ် တုန်ယင် နေတဲ့ သူ့ဘယ်ဖက် လက်ကလေးနဲ့ ၊
အကြောတွေ ဆုတ်ဆုတ် စိုင်းစိုင်း တွန့်တွန့် ရွံ့ရွံ့ နဲ့…
ဒီဇင်ဘာ(၁)ရက်နေ့လေးက ကမ္ဘာ့AIDSနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်တတ်နိုင်သ လောက်လေးနဲ့ အားဖြည့်ပါဝင်ချင် မိပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ HIVကူးစက်ခံ မိဘမဲ့ကလေးငယ်များအတွက် သုခရိပ်မြုံဆိုတဲ့ ဂေဟာလေးတစ်ခုကို ဒဂုံမြို့ သစ်အရှေ့ပိုင်း တပင်ရွှေထီးလမ်းမှာ ဖွင့်လှစ်ထားခဲ့ပြီး အဲဒီ့ရိပ်မြုံလေးအတွက် အဖြူရောင်သက်တန့်ဆိုတဲ့ စာပေ၊ ရုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ အနုပညာရှင်တွေ ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့လေးက ကဗျာရွတ်ပွဲလေးတွေ ပြုလုပ်ပြီး အလှူခံငွေ ကောက်ခံ ပေးခဲ့ကြပါတယ်.။ အဖြူရောင်သက်တန့်အဖွဲ့လေး ဘယ်လိုတွေဆောင်ရွက်ခဲ့သလဲ..၊ ဘာတွေပြုလုပ် ခဲ့ကြသလဲ ဆိုတာကိုတော့ အခုပေးထားတဲ့ link လေးက တဆင့်ဝင်ရောက်ပြီး ကရုဏာတွေသက်..၊ မုဒိတာပွား..သာဓုတွေခေါ်နိုင်ပြီး သဒ္ဒါပေါက်ခဲ့ရင် ကုသိုလ်ပါဝင်နိုင်ကြပါတယ်လို့လဲ.. တိုက်တွန်းနိုးဆော်လိုက်ပါ တယ်။
အနာတရတွေနဲ့ ကျန်ရစ်မဲ့ သူတို့ရဲ့ရင်သွေးငယ်လေးတွေကို ထားရစ်ပြီး တမလွန်ကို ထွက်ခွာသွားရမယ့် အမေ တွေရဲ့ခံစားချက်ကို ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ ကဗျာလေးဖြစ်ပါတယ်လုိ့ အစချီပြီး ၂၀၀၇ခုနှစ် ဇွန်လ၆ ရက်နေ့ နေ့လည် တစ်နာရီခွဲ အချိန်မှာ ဆရာစံလမ်းရှိ Mr.Guitar Cafe တွင် ကျင်းပခဲ့တဲ့ အဖြူရောင်သက်တံ ကဗျာရွတ်ဆိုပွဲ
( White Rainbow Poetry Performace ) မှာရွတ်ဆိုခဲ့တဲ့.. ကဗျာလေးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပြစ်မှုကို ဘယ်လိုစီရင်ကြသလဲ သိချင်တယ်...
ချစ်သူ့နာမည်ကို အရေပြားပေါ် ဆေးဆိုးခဲ့တာပဲရှိတယ်တဲ့..။
အနန္တငါးပါးကို.. ညွှတ်တွား ကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့လက်
ဘယ်ကစဘယ်မှာဆုံးမယ်မှန်း မသိတဲ့ သံသရာအမှောင်ထဲ
အားမတန်သော်မှ လျော့လို့မရတဲ့ မာန်တွေနဲ့
မီးကျီး မီးခဲလို ပူလှပေါ့..။
အခု.. သားလေးရဲ ပြတင်းဝက..
သားလေးကိုလှုံထွေးထားတဲ့ နေခြည်နွေးနွေးဟာလဲ.. မေမေပေါ့..
ပကတိဖြူစင်ရွှင်လန်း.. ကျမ်းမာသန်စွမ်းဆဲ.. သားလေး.....
မ တွေ့ ချင် လေ နဲ့..။ ။
at 7:14 AM 11 comments: